Fossil dia manolotra smartwatches vaovao miaraka amin'ny Wear OS ao amin'ny IFA 2019 | Vaovao momba ny gadget
Fossil dia manolotra smartwatches vaovao miaraka amin'ny Wear OS ao amin'ny IFA 2019
Ny fosil dia iray amin'ireo marika malaza indrindra amin'ny sehatry ny famantaranandro marani-tsaina. Manana modely marobe miaraka amin'ny Wear OS izy ireo, izay mitombo amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana IFA 2019. Nandao antsika vao haingana ny marika miaraka amin'ny famantaranandro Puma, natolotra tamin'ny andro voalohan'ity IFA ity. Ankehitriny dia avelany miaraka amin'ny maodely vaovao an'ny azy ireo izahay.
Amin'ny tranga rehetra dia mahita famantaranandro mampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa isika. Ny fosil dia iray amin'ireo marika mampiroborobo indrindra ary miankina betsaka amin'ny rafitra fiasan'i Google amin'ny famantaranandro. Ho fanampin'ilay modely Puma, avelany miaraka amina famantaranandro vaovao roa isika ny mahaliana.
1 Fosily taranaka fahadimy
Fosily taranaka fahadimy
Ny orinasa dia mamela antsika amin'ny lafiny iray miaraka amin'ny taranaka fahadimy amin'ny famantaranandrony. Izahay dia mahita smartwatch izay tonga miaraka amin'ny maody bateria lava, ahafahantsika mamela manitatra ny faharetan'ny azy hatramin'ny farany ambony, amin'izay afaka manohy mampiasa azy io mandritra ny andro maromaro na dia tsy afaka mitaky izany aza isika.
Ny efijery amin'ity famantaranandro Fossil ity dia 1,3 santimetatra ny habeny. Toy ny mahazatra, efijery mikasika, izay mampiasa ny endriny Wear OS vaovao, noho izany dia tsotra be ny fitetezana amin'ity lafiny ity. Ny fahafaha-mitahiry dia nitombo avo roa heny tamin'ity taranaka vaovao sy fahadimy an'ny marika ity. Ankoatr'izay, ampidirina ao ny famandrihana tsy misy tariby, izay zava-baovao mahaliana ny mpampiasa. Izy io dia misy mpandahateny ahafahantsika miantso na mamaly.
Tahaka ny fanao amin'ny famantaranandro Fossil, dia mifanakalo ny tadiny. Hitanay ny karazan-tadiny rehetra azo isafidianana, ary koa fitaovana maro, manomboka amin'ny fehikibo hoditra ka hatramin'ny silôna. Ity famantaranandro ity dia azo vidiana amin'ny tranokala ofisialin'ny orinasa $ 295.
Ny maodely hafa ao anatin'ny faritra Fossil mandefa ao anatin'ny marika Michael Kors. Mamela antsika amin'ny famataran-jiro vita amin'ny vy tsy misy fangarony izy ireo, izay manome endrika endrika mahazatra kokoa, izay tsy isalasalana fa mahaliana ny mpampiasa maro, satria natolotra ho safidy hampiasaina amin'ny toe-javatra isan'andro na afaka hitafy palitao.
Ny marina dia mamela antsika hanana asa vaovao maro izy, mitovy amin'ny an'ny fiambenana hafa. Amin'ny sehatry ny amponga no tena betsaka izay ahitantsika fiovana bebe kokoa amin'ity famantaranandro ity avy amin'ny Fossil. Izy io dia miaraka amin'ny maody bateria efatra amin'ity tranga ity.
Mode bateria mitatra izay ahafahanao mampiasa ny famataranandro mandritra ny andro maromaro, fa ny fiasa fototra fotsiny ihany.
Ny Mode Daily dia manome fidirana amin'ny ankamaroan'ny asa ary hitazona ny efijery.
Ny fomba amam-panao na Fomba amam-panao izay mamela ny mety hanitsiana ny fampiasana ireo fiasa amin'ny zavatra ilainao.
Ny Time-Only Mode dia tsy haneho afa-tsy ny fotoana eo amin'ny efijery, toy ny famantaranandro mahazatra ihany.
Ankoatr'izay, toy ny amin'ny famantaranandro Fossil dia manana fanamafisam-peo izay hahafahantsika mamaly antso amin'ny fotoana rehetra. Ity famantaranandro ity dia efa natomboka tamin'ny tranokala ofisialin'ny marika amin'ny vidiny $ 350. Izy io dia azo vidiana amin'ny volamena, volafotsy, volamena raozy, na loko misy endrika roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » SmartWatch » Fossil dia manolotra smartwatches vaovao miaraka amin'ny Wear OS ao amin'ny IFA 2019
Fitaovana mifandray amin'ny Ring dia ahafahantsika mampifandray ireo fitaovantsika Ring rehetra